Guddoonka & Guddiyada Joogtada Ee Barlamaanka oo kulan ay yeesheen ku iclaamiyey in Maalinta Axada ah laga doodo…. – idalenews.com
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinta berri lagu wadaa inuu ka doodo mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), kadib markii ay maanta shir yeesheen Gudoonka Baarlamaanka iyo Gudiyada Joogtada Baarlamaanka.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ay wehliyeen labadiisa kuxigeen iyo 15-ka Gudoomiye ee Gudiyada joogtada baarlamaanka ayaa ka dhacay Hoyga Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Gudoonka Baarlamaanka iyo Gudoomiyaha 15-ka Gudi ayaa isla gartay in maalinta berri loo qeybiyo Xildhibaanada qoraalka mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha, si ay u soo aqristaan, kadiba uga doodaan maalinta Isniinta.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Gudiyada joogtada baarlamaanka ay ku soo jeediyeen in la dedejiyo mooshinka, si baarlamaanka go’aan uga gaaro khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa la sheegayaa inuu ka codsaday Gudoomiyeyaasha Gudiyada joogtada inay mooshinka ay si dhex dhexaad ah u galaan, isla markaana aanay dhicin fowdo, iyadoo horay Gudoomiyuhu ugu baaqay Xildhibaanada in aanay u ololeyn khilaafka labada mas’uul.
Kulanka maalinta berri ayaa laga hor aqrin doonaa mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha ee kalsooni kala noqoshada, waxaana la filayaa in marka codka kalsoonida loo qaadayo inuu hor-yimaado baarlamaanka
Khilaafka Madaxda Sare ee Dowlada oo saameyn ku yeeshay shaqada hay’ado ka tirsan dowlada Federaalka